कांग्रेसको दोस्रो चरणको कार्यक्रम सकियो, अवरोध छिचोल्दै प्रचारमा, शुक्रबार चुनावी सभा र ¥याली | Rastra News
कांग्रेसको दोस्रो चरणको कार्यक्रम सकियो, अवरोध छिचोल्दै प्रचारमा, शुक्रबार चुनावी सभा र ¥याली
पोखरा, ५ मंसिर । नेपाली कांग्रेसको चुनावी प्रचार अभियान जारी छ ।
गत कात्तिक २१ गतेदेखि शुरु भएको अभियान तेस्रो चरणमा आइपुगेको छ । दोस्रो चरण बिहीबारबाट सकिएको छ । शुक्रबारदेखि तेस्रो चरणका कार्यक्रम प्रभारम्भ हुने कास्की कांग्रेसले जनाएको छ ।
शुक्रबारदेखि शुरु हुने तेस्रो चरणको कार्यक्रम चुनावीसभामा केन्द्रित हुने सभापति केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार चुनावीसभामार्फत जनताका समस्या, वर्तमान राजनीतिक परिवेशबारे पार्टीको धारणा प्रस्तुत गर्ने र प्रतिवद्धता जनाउने काम हुनेछ ।
यस कार्यक्रममा जनता र पार्टीका उच्च तहका नेता सहभागी गराएर उम्मेदवारले आफ्नो प्रतिवद्धता पेश गर्नेछन् ।
नेता यज्ञबहादुर थापाका अनुसार यो पटक कांग्रेसको पक्षमा राम्रो माहोल बनेको छ । पार्टीका पूर्व सभापति र पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका थापाले पार्टीको पक्षमा यति राम्रो माहोल इतिहासमै नभएको बताए ।
पोखरा–४ को घरदैलोमा सहभागी नेता थापाले सरकारप्रति जनता रुष्ट भएको आफूले पाएको बताए । उनी पोखरा–४ का चुनावी कमाण्डर समेत हुन् ।
जनताले बोकाइदिएको भारी सही ठाउँमा पुर्याएर बिसाउँछु ः पौडेल
उक्त अवसरमा नेता धनराज गुरुङले त्यागी, इमान्दर र निष्ठावान व्यक्तित्व खेमराज गुरुलाई जिताउँदा पोखरेलीको इज्जत नै माथि हुने बताए ।
उनले भने, ‘खेमराज गुरु सबैले सम्मान गर्न लायक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँ संस्कारी नेता पनि हो । धर्म संस्कारलाई उहाँले सधैं शिरमा राखेर हिंड्नु भएको छ । त्यसैले उहाँलाई विजय गराउनु पोखरेलीको कतव्र्य हो ।’ खेमराज जस्ता व्यक्तित्वलाई जिताएर देशैभर इमान्दार व्यक्ति राजनीतिमा आवश्यक पर्छ भन्ने सन्देश दिन पनि आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘हामीले विभिन्न चरणमा गरेर सबै मतदातालाई भेटिसकेका छौं । अब चुनावीसभाको तयारी गरिरहेका छौं’, उनले भने मतदातालाई पनि उम्मेदवारसंगै भेट गराइदिएका छौं ।’
उम्मेदवार पौडेलसहित कांग्रेसका नेताहरू मतदाताकोमा पुग्दा मतदाता निकै उत्साहित भएको उनले बताए । अर्मलाको ¥यालेमा आयोजित घरदैलो कार्यक्रममा उम्मेदवार पौडेललाई साथ दिन नेता शेखर कोइराला पनि पुगेका थिए ।
उम्मेदवार खेमराज पौडेल, नेता धनराज गुरुङ लगायतले पोखरा–१६, जोगिमणीस्थित रनबहादुर गुरूङको परिवारलाई भेटेर समवेदना प्रकट गरेका छन् । रणबहादुर गुरुङको ९७ वर्षको उमेरमा केही दिन अघि निधन भएको थियो ।
स्व. रणबहादुरका छोराहरू योगबहादुर र रुन बहादुर गुरुङका साथै परिवारजनलाई भेटेर पौडेलले समवेदना प्रकट गरेका थिए ।
उम्मेदवार पौडेलले आफ्नो धर्म, संस्कार छोड्न नहुने बताए । अरूले ७ दिन मै काजकिरिया सके पनि धर्म संस्कार अनुसार नै गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
उनका अनुसार बाटो खनेर ढुंगा थोपरिएको छ । नजिकै डोजर छ तर चालक छैनन् ।
शुक्रबार विशाल ¥याली
दिउँसो ४ बजे हुने ¥यालीमा पार्टीका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीद्वय डा. सशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का लगायत केन्द्रीय सदस्य, कास्कीका नेताहरू समेत सहभागी हुने कास्की कांग्रेसका सभापति कृष्ण केसीले जानकारी दिए ।
यसैगरी शुक्रबार पोखराको रत्नचोकर राष्ट्रबैंक चोकको बीचमा सडक डिभिजन कार्यालयको अगाडि चुनावीसभा हुँदैछ । सभालाई पार्टीका नेताहरू बालकृष्ण खाँड, गगन थापा, डा. मिनेन्द्र रिजाल, जीतजंग बस्नेत लगायतले संवोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।